မိဘတွေနဲ့ ဘာလို့ အမြင်မတူနိုင်ရတာလဲ – Live the Dream
မိဘတွေနဲ့ ဘာလို့ အမြင်မတူနိုင်ရတာလဲ
ဆောင်းပါး နှင့် သတင်းများ ,ဘဝ
ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှ ကလေးတုန်းက အခြေအနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ခြားနားလာပါတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ မိဘတွေကပဲ ကိုယ့်ကမ္ဘာ၊ မိဘပြောတာမှန်သမျှကို တဝေမသိမ်း အကုန်လုံး နားထောင်ခဲ့ကြဖူးတယ်လေ။ ဒါပေမယ့် အချိန်တွေ ကြာလာတယ်၊ ကိုယ်လည်း သိတာတွေ ပိုများလာတယ် အပေါင်းအသင်းတွေလည်း ပိုများလာတယ် ဆိုတော့ မိဘတွေနဲ့က အမြင်တွေ ခြားလာတယ်။ မိဘတွေ ပြောတာကို အကုန်နားမထောင်ချင်တော့ဘူး။ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချချင်လာတယ် လွတ်လပ်မှုကို ပိုလိုလားလာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကြီးလာလေလေ မိဘတွေနဲ့ ပြဿနာကလည်း ကြီးလာလေလေ ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်လာတာပေါ့။
ဖုန်းသုံးတဲ့ ပြဿနာတွေ၊ relationship အကြောင်းတွေ၊ ပညာရေးနဲ့ ပက်သက်တာတွေ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ၊ လွတ်လပ်မှုတွေကအစ ကန့်သတ်ချက်တွေ ဖြစ်လာတော့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ မိဘတွေဆီကနေ ကွဲထွက်လာကြတော့တာပေါ့။ ဒီလိုကန့်သတ်မှုတွေ၊ အမြင်မတူမှုတွေ ဘာလို့များ မိဘနဲ့ လူငယ်တွေအကြား အမြဲဖြစ်နေရတာလဲ။ ဒီလိုအမြင်မတူတာတွေကို ဘယ်လိုလျှော့ချရမလဲ။
၁. Generation gap
တစ်ချို့မိဘတွေက အခုခေတ်အနေအထားကို ကောင်းကောင်း နားလည်ပေးနိုင်ကြပေမယ့် တစ်ချို့ကျတော့ generation gap ကြောင့် အခုခေတ်အခြေအနေနဲ့ သိပ်မရင်းနှီးကြပါဘူး။ တစ်ခုခုဆိုရင် မေမေတို့တုန်းက ဘယ်လိုနေခဲ့တာ၊ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာ ဆိုတာမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ကို ပြန်ပတ်နေကျလေ။ ခေတ်ကလည်း အချိန်တိုအတွင်းမှာ အများကြီးကို ပြောင်းလဲလာတော့ တစ်ချို့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေကိုကျ လက်မခံနိုင်ဖြစ်နေကြတာပေါ့။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ခေတ်ကပြောင်းနေပြီလေ တစ်ချို့အရာတွေကိုတော့ လက်ခံရမှာပဲ နားလည်ပေးရမှာပဲ။ ကိုယ့်သားသမီးကို ကိုယ့်ခေတ်အခါတုန်းကလို ဆက်ဆံရင်တော့ သေချာပေါက် ပြဿနာ ပိုကြီးပါလိမ့်မယ်နော်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ချို့အရာလေးတွေကိုတော့ နားလည်ပေးဖို့ ကြိုးစားပါ သူတို့ခေတ်ပဲ လုပ်ပါစေဆိုပြီး လျှော့ပေးတာမျိုးလေး တစ်ခါတစ်လေ လုပ်ပေးပါနော်။
သားသမီးတွေဘက်ကလည်း တာဝန်မကင်းပါဘူး။ ဒီ Generation gap ကို သားသမီးတွေလည်း နားလည်ထားဖို့လိုတယ်နော်။ ဟာ ဒီခေတ်ကြီးမှာ မေမေတို့က ဒိတ်အောက်လိုက်တာ ဆိုတာမျိုး မတွေးပါနဲ့။ သူတို့နားမလည်တဲ့အရာ တစ်ခုခုဆိုရင် သေချာလေး ရှင်းပြပေးပါ။ ဒါက ဒီလိုရှိတယ်၊ ဒီခေတ်မှာ ဒီလိုဖြစ်နေတာလေ ဆိုတာမျိုးပေါ့။ သေချာပြောပြပေးရင် မိဘတွေကလည်း နားလည်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ မိဘစကားကိုလည်း အကုန်ပယ်မချပါနဲ့နော်။ ဘယ်လိုပဲ Generation gap ဖြစ်နေတယ် ထားဦး ကိုယ့်ထက်တော့ ပိုအတွေ့အကြုံများတယ်၊ ပိုသိတယ် ဆိုတာကတော့ အမှန်ပဲလေ။
၂. ပွင့်လင်းမှု မရှိတာ
နောက်ပြဿနာတစ်ခုကတော့ မိဘနဲ့သားသမီးအကြား ပွင့်လင်းမှု မရှိတာပါပဲ။ တစ်ခုခုဆို စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်း ပြောရရင် မကျေနပ်ရင် မကျေနပ်သလို၊ အခက်အခဲဖြစ်နေရင် အခက်အခဲဖြစ်သလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြကြဖို့ လိုပါတယ်။ သားသမီးတွေကလည်း တစ်ခုခုဆို မိဘတွေကို မပြောချင်ကြဘူး။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လုပ်မယ် ဆိုတဲ့စိတ်က ရှိနေလေတော့ မိဘတွေနဲ့က ပြဿနာကြီးကုန်ရောလေ။ ဒီလိုမလုပ်ပဲ အမြဲတမ်းမဟုတ်ရင်တောင် တစ်ခါတစ်လေတော့ မိဘတွေအပေါ် ပွင့်လင်းတာလေးတွေ လုပ်ပေးပေါ့ မိဘတွေက သူတို့ကို လာပြောပြမှာကို စောင့်နေတတ်ကြပါတယ်နော်။
ဒါသားသမီးတွေမှ မဟုတ်ပါဘူး မိဘတွေဘက်ကနေလည်း သားသမီးတွေအပေါ် ပွင့်လင်းရပါမယ်။ မိဘတွေဘက်ကလည်း သားသမီးတွေ ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုတော့ မကြိုက်ဘူး ဒီလိုလေးဖြစ်စေချင်တယ်၊ အချိန်တွေ ပိုများများ အတူတူဖြုန်းကြရင် ပိုကောင်းမယ် ဆိုတာမျိုး သားသမီးကြောင့် စိတ်ဆင်းရဲတာမျိုး၊ ဝမ်းနည်းရတာမျိုးလေးတွေ၊ ပျော်ရွှင်ရတာလေေးတွ ဒီလိုမျိုး စိတ်ခံစားချက်လေးတွေကိုလည်း ဖွင့်ဟပေးဖို့ လိုပါတယ်နော်။ ဒီလိုလေး နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ပွင့်လင်းကြမယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုတွေ ပိုရှိလာမှာပါ။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆွေးနွေးမှုလေးတွေ ရှိဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ ဟုတ်တာပေါ့ တစ်ချို့လူငယ်တွေက အကုန်လုံးကို ဖွင့်မပြောချင်ကြတာ မှန်ပါတယ် အားလုံးကိုတော့ မပြောရင် မပြောနဲ့ပေါ့ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကိစ္စလေးတွေကိုတော့ မိဘတွေနဲ့ တိုင်ပင်တာမျိုးလေးတွေ လုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါမှ ကိုယ်လိုချင်တာ ဘာလဲ၊ ကိုယ်ဘာတွေ လုပ်ချင်လဲ၊ ကိုယ့်အမြင်က ဘယ်လိုဆိုတာ သူတို့ သိမှာပေါ့။ မဟုတ်ရင် ကိုယ်ဘာလိုချင်မှန်းလည်း မသိနဲ့ သူတို့စကားအတိုင်းပဲ လုပ်ခိုင်းရင် မိဘတွေက အတင်းပဲ ဆိုတာက ဖြစ်ဦးမယ်လေ။ ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်း ဒါကိုပဲ လုပ်ချင်တယ် ဆိုတာမျိုး လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးနော် ဒါဆွေးနွေးခိုင်းတာပါ ဆန္ဒပြခိုင်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အမြင်ကဘာလဲဆိုတာ မိဘတွေကို သေချာ ရှင်းပြပြီး သူတို့အမြင်တွေကိုလည်း မေးကြည့်ပါနော်။
မိဘတွေကလည်း ကိုယ့်သားသမီးကို ဘာဖြစ်စေချင်တယ်၊ ဘာကိုတော့ မလုပ်စေချင်ဘူး ဆိုတာမျိုး သားသမီးတွေကို သေချာရှင်းပြပြီး ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မိဘတွေက အဲလိုဆွေးနွေးတာမျိုးတွေ သိပ်မလုပ်ကြဘူးလေ။ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာကိုပဲ လုပ်ဆိုပြီး ပြောတာမျိုးတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနဲ့ကျတော့ အဆင်မပြေဘူးပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် အတင်းအကျပ် မလုပ်ဘဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်တာလေးတွေနဲ့ ပြောင်းလဲကြည့်ပါနော်။
ဒီတစ်ခါတော့ အချက်တွေ အများကြီး မဟုတ်ဘဲ အချက်သုံးချက်ကိုမှ မိဘနဲ့ သားသမီးအတွက်ဆိုပြီး ခွဲပေးထားပါတယ်နော်။ ခေတ်တွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနဲ့ မိဘတွေအကြားမှာ အနည်းနဲ့အများကတော့ ရှိနေဦးမှာပါပဲ။ တကယ်တမ်း အရေးကြီးဆုံးက နားလည်မှုပါ။ မိဘက သားသမီးကို နားလည်ပေးဖို့ လိုသလိုပဲ သားသမီးဘက်ကလည်း မိဘတွေအတွက် တွေးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုမှပဲ မိဘနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လေးတို့ကြား ဆက်ဆံရေးတွေက အရင်ကထက် ပိုကောင်းလာနိုင်မှာပါ။ သားသမီးတွေဘက်ကနေ မိဘတွေရဲ့ အချစ်ကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မေ့လို့မဖြစ်ဘူးနော်။
အားလုံးပဲ အမြင်မတူတာတွေ လျှော့ချနိုင်ပြီး နားလည်မှုတွေ တည်ဆောက်နိုင်ကြပါစေနော်။